दशैंमा सुनसान काठमाडौंः फोटोमा नयाँ वानेश्‍वर चोक — OnlineDabali
काठमाडौँ । आज दशैंका नवौं दिन । आज र भोली दशैंको रमझम उत्कर्ष पुग्ने गर्दछ ।
अहिले विहानको ठिक १० बजेको छ । म यतिबेला निकै व्यस्त हुन काठमाडौँको नयाँ वानेश्वर चोकामा छु । अनलाइन डबलीको कार्यालयबाट म वानेश्वरमा पुग्दा फाट्टफुट्ट केही निजी सवारी साधन बाहेक कुनै पनि सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन् ।
मैले वानेश्वर चोक वरपरको दृश्य क्यामारामा कैद गर्दैगर्दा एक जना ट्राफिक प्रहरीलाई देखेँ । पहिले यो चोकमा करिब एक दर्जन ट्राफिक प्रहरी हुन्थे । बीचको बिटमा उभिएर चारैतिरका गाडी र पैदत यात्रुलाई पास गराउन भ्याई नभ्याई भइरहन्थ्यो । तर, आज एक जना मात्रै छन् यहाँ । त्यही पनि साईडतिर उभिएका । बीच चोकको बीट खाली छ ।
नदीको बेग झैं गाडीको लहरोको बीचमा पैदल यात्रुलाई रोडक्रस गर्न छोटो समय दिन्थे ट्राफिक प्रहरीले । उक्त समयभित्रै मानिसहरु निकै हस्याङफस्याङ गर्दै रोडक्रस गर्ने गरिन्छ यहाँ । त्यो क्रममा मानिसहरु आपसमा ठोक्किएर घाइते समेत हुन्थे । कसैले खुट्टामा टेकेर जुत्ता निस्कन्थ्यो तरपनि कसैसँग बोल्ने भन्दा मनमनै गाली गर्दै दौडिनु पर्ने अवस्था हो यहाँको । तर आज सुनसान छ ।
म ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीको नजिक पुगेँ । उनको नाम शिवपुजन मण्डल रहेछ । यहाँको अवस्थाबारे मण्डलले जानकारी दिँदै भने, ‘सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्, फाट्टफुट्ट निजी गाडी चलेका छन् । त्यस्तै मोटरसाइलक पनि निकै कम मात्रमा चलेका छन् ।’ उनले भोलीबाट केही सवारी चाप बढ्ने अनुमान समेत गर ।
नयाँवानेश्वरबाट पुरानो वानेश्वर जानेतिरको रोड अथवा संसद भवनको २ र ३ नम्बर गेट अगाडि केही ट्याक्सी मानिसको पर्खाइमा थिए । अरुतिरको रोडमा फाट्टफुट्ट मोटरसाइलक चलेको देखिन्छन् । यसैबीच एउटा साझा बस र ट्याम्पु देखिए, त्यो पनि पूरै खाली ।
मानिसको निकै चाप हुने यो चोकको सडकमा हिड्दा र रोडक्रस गर्दा कसैले कसैलाई हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन थियो । घरमा ऐना हेर्दै गरेको मेकअप र लगाएका लुगाको समेत ख्याल नगरी ट्राफिकले दिएको समयभित्र रोडक्रस गर्न दौडिनु पर्ने अवस्था थियो । तर, आज रोडमा हिड्दै गरेका केही व्यक्तिहरुले आपसमा निकैबेर हेराहेर गरेको देखियो । यस्तो सुनसान चोकमा आउने कारण के होला ? र आफूजस्तै होला कि नहोला ? अथवा आफूजस्तै सडक छाप को होला भनेर आपसमा हेराहेर गरेको मैले अनुमान गरेँ ।
फोटोमा यस्तो देखियो वानेश्वर
रेल स्टेशनमा भागदौड हुँदा २२ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते
प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता, एयरपोर्टबाटै भने- डाक्टरहरूको के पारा हो ?
Posted in फोटो ग्यालरी, मुख्य खबर | Leaveareply
यस्‍तो छ नेकपाको सुर्खेत बन्द (पाँच फोटो)
अपडेटः राकम कर्णाली दुर्घटनाको दर्दनाक १० फोटो, मृतकको नामसहित
पाका कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुरको नीवास यसरी तयार हुँदैछ, हेर्नुहोस् चार दृश्य
सेताम्य सिमिकोट (फोटोफिचर)
महिला दिवसको अवसरमा बुटवलमा साँस्कृतिक कार्यक्रम (फोटो फिचर)